အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill သည် PSA အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ,Bottle သ Refill များအတွက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံ,PSA အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > Compact အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill သည် PSA အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ
ထွက်နိုင်ရေး: 30 Sets/Month
အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ
1.Oxygen Bottle သ Refill စက်ရုံဖျေါပွခကျြ
PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံတိုက်ရိုက်ချုံ့လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ပုလင်း Refill စက်ရုံ Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC ရေခဲသေတ္တာလေကြောင်းလေမှုတ်စက်နှင့် filter, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့, ETR PSA အောက်စီဂျင်စက်ရုံ, အောက်စီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပုလင်း Refill ဘူတာရုံပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
compressed လေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အဓိကစက်ရုံတစ်အချို့သောအဆင့်အထိလေမှုတ်စက်နှင့် filter မှတဆင့်သန့်စင်သည်။ Air ကိုကြားခံအရှင်ပူးတွဲ mpressed လေကြောင်းအရင်းအမြစ်များ၏ပွောငျးခွငျးလျှော့ချရန် compressed လေထု၏ချောမွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါစက်ရုံတစ်ဦးအချိန်သက်သေပြအောက်စီဂျင်မျိုးဆက်နည်းလမ်းဖြစ်သော PSA (ဖိအားလွှဲထိစိမ့်) နည်းပညာနှင့်အတူအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သည်။ 93% မှာတပ်မက်လိုချင်သောအသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏အောက်ဆီဂျင်± 3% ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ငွေ့ချောမွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာအောက်စီဂျင် 4bar ဖိအားမှာထိန်းသိမ်းထားသည်။ အောက်ဆီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူအောက်ဆီဂျင်ဖိအား 150bar မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့တစ်ဦးအောက်စီဂျင်ပုလင်း Refill ဘူတာရုံနှင့်အတူဆလင်ဒါထဲမှာဖြည့်ပါ။
2. အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ အားသာချက်
စက်ရုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် Refilling 3. အောက်ဆီဂျင် Bottle သ
ETR အင်ဂျင်နီယာ & နည်းပညာ, client များ ETR ဖြေရှင်းချက်များ၏အရည်အသွေးသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ETR သာအကောင်းဆုံးပေးသွင်းခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့အောက်စီဂျင်အပင်သူတို့ကစက်ရုံစွန့်ခွာမတိုင်မီအရာအားလုံးအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်သေချာစေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူများကအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး & ပြန်တမ်းနေကြသည်။
ဘူတာမော်ဒယ်ကို Select လုပ်ပါ Refilling 4. အောက်ဆီဂျင် Bottle သ
Bottle သ Refill များအတွက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံ
PSA အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Refill စက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill ပစ္စည်း
အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill ပစ္စည်းစက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ Bottle သ Refill များအတွက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံ PSA အောက်ဆီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ အောက်စီဂျင် Refill စက်ရုံ အောက်စီဂျင် Cylinder Refill စက်ရုံ အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill ပစ္စည်း အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill ပစ္စည်းစက်ရုံ အောက်စီဂျင် Make စက်ရုံ